တကယ်ချစ်မိတဲ့အခါ……. October 9, 2013
Filed under: ခံစားမူရသ — လမင်းငယ် @ 1:32 am
သူ့ကို တကယ်ချစ်မိတဲ့အခါ. . . . . . . .. .
သူ ဆိုတာ တွေးလိုက်ရုံနဲ့ ငါ့ ရင်ထဲ ကြည်နူးမိသွားတယ်.
ထက် သူ ဘာလုပ်နေလဲ အဆင်ကောပြေရဲ့လားဆိုတာကို အရင်တွေးမိသွားတယ်.
မိုးတွေအရမ်းရွာတဲ့အခါ ငါက လုံခြုံတဲ့ အမိုးအကာအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ သူကော မိုးရေထဲမှာလား ချမ်းနေမလားလို့ တွေးပူမိသွားတယ်. .
သူ ငါ့ဆီ message လေး မပို့တဲ့အခါ ငါ့ဆီ message လေး ဘာလို့မပို့တာလဲဆိုတာထက် ငါ သူ့ကိုဘယ်လို message လေးပို့ပေးလိုက်ရင် သူ ပျော်
သွားမလဲ လို့ တွေးမိသွားတယ်. .
သူ ph မဆက်တဲ့အခါ သူ အလုပ်များနေလို့ ph မဆက်တာပဲဆိုတာထက် ငါ ph ဆက်ရင် သူ့အတွက် အနှောင့်ယှက်ဖြစ်နေမှာပဲလို့
ငါ သူ့ကို သတိရတယ်ဆိုတာ
ထက် သူ ငါ့ကို သတိရလို့သူ့
ဆုတောင်း ပေးမိတယ်. . .
ငါ သူ့ကို တွေ့ချင်လိုက်တာ
ဆိုတာထက် သူ လည်းငါ့ကို
သူ့ ကြောင့်ဆိုတာထက် ငါ့
ကြောင့် သူ မခံစားရပါစေနဲ့
လို့ ဆန္ဒပြုမိတယ်. .
သူ့အပေါ် တကယ်ချစ်မိတဲ့အခါ. .
အတ္တ ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး. .
မာန ဆိုတာ လွင့်စင်သွားတယ် သူ့ကို အတွေးနဲ့မြင်ယောင်
ငါ့ ပါးပြင်ကို စိုစွတ်စေခဲ့တယ်
သူ့ ဆီက ရယူမှုထက် ကိုယ့်
ဆိုတာပဲ တွေးမိသွားတယ်. .
သူ သူ ဆိုတာနဲ့ ငါ ဆိုတာ
ချစ်သူရယ်. . ငါ ကိုယ်တိုင်
တောင်မသိသေးတဲ့ ချစ်ခြင်း နဲ့ နင့်အပေါ် ရင်ခုန်မြတ်နိုး
စွာ ချစ်နေမိတယ် ဆိုတာ. .
ငါ ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ. .
အဆင်ပြေပါစေ. . .
ရတာထက် ပိုလိုချင်မိတဲ့အခါ…. September 4, 2013
Filed under: ဘာသာပြန် — လမင်းငယ် @ 4:41 am
ရတာထက် ပို လိုချင်မိတဲ့အခါ. .
တစ်ခါက ဆေးရုံတခုရဲ့ အထူးခန်းမှာ အတူတက်နေတဲ့ လူနာနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်. .သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးက နှလုံးရောဂါနဲ့ နောက်ဆုံးအခြေနေကို ရောက်နေတဲ့သူတွေပါ. .သေမင်းခေါ်မဲ့အချိန်ကို အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့. . Oxygen ပိုက် ကိုယ်စီနဲ့. . .အဲဒီအခနိးရဲ့ ပြတင်းပေါက်ကုတင်နားမှာကျတဲ့လူနာက သူ့အခန်းဖော်ကို အမြဲစကားပြောပေးတယ်. .ပြတင်းပေါက်ရဲ့ အပြင်ဖက် သူမြင်မြင်သမျှ အရာတွေကိုပေါ့.. ” သူငယ်ချင်းရေ. .ဒီနေ့ ရာသီဥတုကတော့ အရမ်းသာယာတယ်ကွာ. .ကလေးတွေလည်း ဆော့ကစားနေလိုက်ကြတာ. .ပန်းပွင့်လေးတွေလည်း အရမ်းလှတာပဲ. .ကောင်းကင်ကြီးက ပြာလဲ့လို့နေတယ်. .တကယ်ပဲ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းပါတယ်ကွာ”
” သူငယ်ချင်းရေ. .ဒီနေ့တော့ ရာသီဥတုက အုံ့မှိုင်း မှိုင်းနဲ့ကွ. .ဒါပေမဲ့လည်း တမျိုးသာယာပါတယ်လေ. . ”
ဆိုပြီး တစ်နေ့မြင်တွေ့သမျှကို ဖွဲ့နွဲ့ပြောပြပေးတယ်. .သူ့အခန်းဖော်ကလည်း သူ ကိုယ်တိုင်မမြင်တွေ့ရပေမဲ့လည်း စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီး ကြည်နူးရတာပေါ့. .ဒါပေမဲ့ ကြာလာတော့ နားထောင်နေရတဲ့လူနာက သူ့အခန်းဖော်ပြောပြတာကို အားမရတော့ပဲ သူကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ချင်စိတ်တွေပြင်းပြလို့လာပါရော. .ဒါနဲ့ သူဘယ်လိုမြင်ရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို အကြံထုတ်တော့တယ်. .နောက်ဆုံးတော့ သူ အကြံရသွားခဲ့တယ်. .တစ်ညမှာတော့ တဖက်လူနာ အိပ်ပျော်နေခိုက် လူနာဆီသွားပြီး သူ့ရဲ့ Oxygen ပိုက်ကိုဖြုတ် သူ့ရဲ့ ရှိသမျှအားလေးကိုသုံးပြီး လည်ပင်းညစ်သတ်လိုက်တယ်. .တခဏတွင်းချင်းမှာပဲ ထိုလူနာသေဆုံးသွားတော့တယ်. .သူလည်း သူ့ကုတင်သူပြန်လာပြီး မနက်ရောက်ရင်တော့ဖြင့် ပြတင်းပေါက်နားက ကုတင်ကို သူပြောင်းပြီး မြင်တွေ့ရတော့မဲ့ ရှုခင်းတွေအတွက် ပျော်နေတော့တယ်. . မနက်မိုးလင်းတော့ သေဆုံးသွားတဲ့လူနာ အလောင်းကို လာသယ်ကြတာပေါ့. .အဲဒီတော့ သူက ချက်ချင်းပဲ ဆရာမတွေကို အဲဒီကုတင်ပြောင်းပေးပါဆိုပြီး တောင်းဆိုလိုက်တယ်. .ဆရာမတွေလည်း ပြောင်းပေးလိုက်တယ်. .သူလည်း ဝမ်းသာအားရ မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ ပြတင်းပေါက်ရဲ့ အပြင်ဖက်ကို ကြည့်လိုက်တော့တယ်. .ချက်ချင်းဆ်ိုသလို သူ့ မျက်နှာမှာသွေးမရှိတော့ပဲ နောင်တကြီးစွာရပြီး အဲဒီနေရာမှာပဲ လဲကျ သေဆုံးသွားတော့တယ်. .သူမြင်လိုက်တဲ့အရာက သူမျှော်လင့်ထားသလို သူ့ သူငယ်ချင်းအခန်းဖော် နေ့စဉ်ပြောပြပေးနေတဲ့ သာယာလှပတဲ့မြင်ကွင်း လုံးဝမဟုတ်ပဲ မှောင်မည်းနေတဲ့ နရံကြီးတစ်ချပ်ကိုသာ မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်. .တကယ်လို့သူသာ ရသင့်တာထက် ပို မလိုချင်ခဲ့ရင် သူ့သူငယ်ချင်းလည်း သေမှာမဟုတ်သလ်ု သူလည်း သာယာလှပတဲ့ရှုခင်းတွေကို စိတ်ကူးနဲ့မြင်တွေ့နိုင်အုံးမှာလေ. . .ဒီလိုပါပဲ တစ်ခါတရံလူတွေမှာ ရတာထက်ပိုပြီးလိုချင်လောဘတက်ခဲ့မိရင် ဆင်ခြင်တုံတရား အသိတရားတွေဟာ တဒင်္ဂပျောက်ဆုံးသွားပြီး ကြီးမားတဲ့ မဟာအမှားများကို ပြုလုပ်မိတတ်ကြပါတယ်. .စိတ်. . စိတ်ဆိုတာ အင်မတန်မြန်ပြီး အလွန်တရာမှ ကြောက်စရာကောင်းလှပါတယ်. .. . ဒါကြောင့် မတော်လောဘ မကောင်းတဲ့စိတ်လေးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားရင်းးးး
(ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ထားခြင်းသာ. . .)
Filed under: 1,အတွေ့အကြုံလေးများ — လမင်းငယ် @ 4:38 am
ဒီမနက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီ ph ဆက်တော့ သူက အိပ်ချင်မူးတူး အသံနဲ့ ၁၀ နာရီကျော်နေပြီ. .အဲဒါနဲ့ ကျောင်းမသွားဘူးလားဆိုတော့ သူက ကျောင်းသွားလို့မရဘူးလေ ဒီနေ့စနေနေ့ တဲ့. . အော် ဟုတ်လား အင်း date တွေလည်းပျောက်နေပါပြီဆိုပြီး စိတ်ထဲကနေ ဒီနေ့ စနေနေ့ဆိုပြီး မှတ်ထားလိုက်တယ်. . အဲ ရေမိုးချိုးပြီး အောက်ထပ်ဆင်းလာတော့ အသိ အကိုတစ်ယောက် ရောက်နေတယ်. .သူကရုံးပြေးနေကျလေ. .အဲဒါနဲ့ ‘ ဟေးး တို့အကို ရုံးပြေးပြန်ပြီလား. .ရုံးမတက်ဘူးလား ဆိုတော့ သူက တချက်ကြောင်ကြည့်ပြီး ငါ့ညီမ ဒီနေ့ စနေနေ့လေ. .အော် ဟုတ်သားဆိုပြီး ခုနကပဲတခါမှတ်ထားပြီးသားကိုဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မတင်မကျဖြစ်မိတယ်. .ဒါနဲ့ သူနဲ့ စကားပြောနေတုန်း အိမ်မှာ အဝတ်လာလျှော်ပေးတဲ့ဒေါ်ပု ဆိုတဲ့ အဒေါ်ီလာတာကိုတွေ့လိုက်တယ်. . သူက နှစ်လုံးထီအရမ်း ဝါသနာပါတာလေ. .အဲဒါ နောက်ချင်ဇောနဲ့ ဒေါ်ပု ညက အိမ်မက်မက်တယ် ၃ တစ်လုံးကျိနိးသေပဲ ပတ်လိုက်တော့ များများသာ အောလိုက် ဆိုတော့ ဒေါ်ပုက ဟဲ့ ကလေးမ ဒီနေ့ စနေနေ့ နှစ်လုံးမထွက်ဘူး တဲ့ . . .အော် ဟုတ်သားးး စနေနေ့ . .ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်တော်မကျေနပ်ဖြစ်မိတယ်. .အဲလောက်တောင် မေ့ရလား ဆိုပြီးး.. . .စနေနေ့ စနေနေ့ ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ အခါခါရွတ်နေမိတယ်. . ဒီလိုနဲ့ အိမ်က ကလေးတွေအသံတိတ်နေတော့ ယောင်းမကို မမ ဒီနေ့ စနေနေ့လေ ကလေးတွေကျောင်းပိတ်တယ်မဟုတ်လား သူတို့ကော ဆိုတော့ မမက ငါ့ညီမ ကလေးတွေကျောင်းသွားတယ်လေ ဝါတွင်း စနေနေ့လည်း ကျောင်းတက်ရတယ်လေ တဲ့.. .အော်. . လွဲပြီးရင်းလွဲနေဆဲပါလားနော်. . .ဟု သာ . . . . . .
ဦးနှောက်တွေလည်း ပျက်နေပါပီကော. . . . . .ီ
Filed under: ခံစားမူရသ — လမင်းငယ် @ 3:54 am
သူမ ရဲ့ သူမ. . .
သူမ မူလဘဝ အစ. .
သူမ အမေက သူမကို မမွေးခင် Ultrasound ရိုက်ခဲ့တယ်. .
Ultrasound result က. .
‘အမေ အသက်ယူမလားး ကလေးအသက်ယူမလား တဲ့’
သူမ အဖေနဲ့ အားလုံးသော သူတွေက ဒုတိယမေးခွန်းကို ငြင်းလိုက်တယ်. . ဒါပေမဲ့လည်း သူမ ကံကောင်းထောက်မစွာ လောကကြီးထဲရောက်လာခဲ့တယ်. . ‘Ultrasound ကြည့်မှားခဲ့လို့’
ဒါပေမဲ့လည်းးး သူမ ကံဆိုးစွာ နှလုံးအားနည်းခြင်း ဆိုတဲ့ ရောဂါဆိုးတခု အပိုလက်ဆောင်လေး ပါလာခဲ့တယ်. . .
ဒီလိုနဲ့ သူမ ဘဝ အစ. .
အရုပ်တဖက် ဆေးတစ်ဆုပ်. .
‘ဒီအရုပ်လိုချင်ရင် ဒီဆေး သောက်ရမယ်’
ခါးသက်တဲ့ဆေးလုံးလေးတွေကို ကျိတိမှိတ်မြိုချ သူမ အရုပ်လေးရခဲ့တယ်. .
ဒီလိုနဲ့ သူမမှာ အရုပ်လေးပေါင်းများစွာ. . .
အရုပ်မလိုချင်တော့ဘူး ဆေးမသောက်ချင်တော့ဘူး သူမ ငြင်းဆိုတဲ့အခါ. .
ဒီလိုနဲ့ သူမမှာ အကျီလှလှလေးပေါင်းများစွာ. .
သူမ. . ငြင်းဆန်ရန် ခွန်အားမရှိတော့ပါ ဒီဆေးတွေက သူမ အသက်ဆိုတာ သူမ သိခဲ့တယ်လေ. . .
သူမ ဘဝ. .
တ တိုင်းရ အပူပင်ကင်းမဲ့ခဲ့တယ်. .
တခါတရံ ဝေဒနာဆိုး နှိပ်ဆက်မှုက လွဲရင်ပေါ့. . .
ခါးသီးလှတဲ့ ရောင်စုံ ဆေးလုံးလေးတွေကို အဖော်ပြုရင်းနဲ့ပေါ့. .
သူမဘဝမှာ သူမ အဖော်ဆိုလို့ စကားမပြောတတ်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေနဲ့ သူမ ကို နှစ်သိမ့်မှုပေးနေတဲ့ သံစဉ်လေးတွေ. . .
တခါတရံ သူမ အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ လူမသိ ကျခဲ့ရတဲ့ မျက်ရည်ပေါင်းများစွာ. .
ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့. . .သူမ ဟန်ဆောင်ခြင်းအတတ်များစွာ. .ဒီလိုနဲ့ ဒီလို နဲ့. .
သူမ ရက် လ ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ရင်းးးး
သူမ အတွက် မနက်ဖြန်ဆိုတာ မသေချာတဲ့အရာတခု. .
ဒါပေမဲ့ သူမ ဒီနေ့ ဒီအချိန်လေးကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်နေရတုန်းပါပဲ. . .
သူမ ဘဝ သူမလေ. . . .
သူမ အနှောင်ဖွဲ့များစွာထဲမှ လွတ်မြောက်ဖို့ ရုန်းကန်နေတုန်း . .
သူမ မျှော်လင့်ချက်ယဲ့ယဲ့လေးနဲ့ ဆက်လျှောက်နေတုန်းးးး
သူမ အသည်းနုနုလေးလည်း ကွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေတုန်း. . .
. . . . . . . .သူမရဲ့သူမ
ခြောက်လှန့်ခဲ့တဲ့ အတိတ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ.. March 13, 2013
သမီးလေးအတွက် ဖိနပ် နီနီ… January 8, 2013
Filed under: ခံစားမူရသ — လမင်းငယ် @ 11:29 pm
ပူပြင်းသော နေရောင်အောက်တွင် အ၀တ်မပါ..မည်းပြောင်နေသောကျောပြင်..တောက်လျှောက် ရေကဲ့သို့ စီးကျနေသော ချွေးစက်များကို အံတုလျှက်.ပင်ပန်းနေသော်လည်း သူ့ခမျာ မငြီးငြူ..ဒီနေ့အတွက် လုပ်ခ ပိုရရှိရေးအတွက်သာ..သူချစ်သော သမီးလေးအတွက်..သမီးလေးဟု တွေးလိုက်ရုံနှင့်ပင် ပင်ပန်းသမျှ ပျောက်သွားခဲ့ရသည်။ ပြင်းထန်သော အားတစ်ခုပင်.သမီးလေးသည်သာ သူ့ဘ၀လေ..သမီးလေးက သူ့အား ဖိနပ်သစ်လေးတစ်ရံဝယ်ပေးဖို့ ပူဆာထားသည်။ အတော်တန်ဟောင်းနွမ်းနေသော သမီးလေးခြေဖ၀ါးထက်မှ ဖိနပ်လေးကို မြင်ယောင်မိရွေ့ ကရုဏာ သက်မိသည်။ “အဖေ ညနေ ၀ယ်လာခဲ့ပေးမယ်“ ဟု ပြောလိုက်စဉ် ပြုံးပျော်သွားသော သမီးလေးရဲ့ ချစ်စရာ မျက်နှာ နုနုလေးကို မြင်ယောင်မိသည်။
ဆိပ်ကမ်းမှ ဆန်အိတ်များကို နှစ်အိတ်ဆင့်ထမ်းပြီး ကုန်ကားကြီးပေါ်သို့ မမောနိုင် မပန်းနိုင် တင်နေသည်။ ဆန်အိတ်ရေ များများပိုတင်နိုင်မှ ပိုက်ဆံပိုရမည် မဟုတ်လား..နောက်ပြီး ဒီနေ့ သူ့လုပ်အားခလေးပိုရမှ ဖြစ်ပေမည်။ ပိုရသောလုပ်အားခ လေးနှင့်ပင် သမီးလေးအတွက် ဖိနပ်သစ်လေးတစ်ရံဝယ်ပေးရမည်။ ဖိနစ်သစ်လေးကိုရလိုက်သောအခါ ပြုံးပျော်သွားမည့် သမီးလေး၏မျက်နှာလေးကိုမြင်ချင်မိသည်။ ထိုးအားတွေနှင့်ပင်…ဆန်အိတ်ရေပေးသောသူကလည်း..
.. “ ဟာ ကိုသာအေးကြီး သွက်လှချည်လားဗျ..ခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာ မမောသလိုပဲ..နားနားပြီးမှ သယ်ပါဗျာ..ခဏနေ ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်းကိုပဲလုပ်ခရှင်းပေးနေရလို့ အခြားသူတွေကို မရှင်းပေးနိုင်ပဲနေပါအုံးမယ်ဗျာ”…ဟုပင် နောက်ယူရသည်။ မိမိမှာ ဘာမျှပင် မတုန့်ပြန်အား ပြုံးရုံသာပြုံးပြီး ဆန်အိတ်များကိုသာ မနားတမ်းတင်နေသည်။
…“ဟာ ကိုသာအေးတို့များ နှစ်ယောက်စာယူတာဗျိုး”…ဟုပင်…
ဘာပြောပြော သူ လုပ်ခပိုရလေပြီ..ဒီနေ့ ညနေစာအတွက် ဆန်ဖိုး မနက်ဖြန်မနက်အတွက် ဆန်ဖိုးဈေးဖိုးလေးဖယ်ပြီး ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံကို သမီးလေးပူဆာထားသော ဖိနပ်လေးကို ၀ယ်ပေးနိုင်ပေတော့မည်။ သူ ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်သည်။ ထိုနောက် သူ့ခြေလှမ်းများက ဖိနပ်ဆိုင်လေးဆီသို့…
ဖိနပ်ဆိုင်လေးသို့ ၀င်လိုက်ရင်း သူ၏မျက်လုံးများက ကလေးဖိနပ်လေးများဆီသို့ လျှောက်ကြည့်နေခိုက်..
.. “အစ်ကို ကလေးဖိနပ်လိုချင်လို့လား ဘယ်နှနှစ်အရွယ်လဲ”…ဟု ဆိုင်မှ အရောင်းကောင်မလေးက မေးလေသည်။
..“အင်း ညီမလေး ၅ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးစီးဖိနပ်လှလှလေး တစ်ရံလိုချင်လို့”…ဟု ဆိုလိုက်သောကြောင့် ထိုကောင်မလေးက ဖိနပ်လေးများကို တစ်ရံပြီး တစ်ရံထုတ်ပြလေသည်။
.“.ဖေဖေ ဖိနပ် အလီရောင်လေးနော်“..ဟု အနီရောင်ကို စကားမပီမသအသံလေးဖြင့်မှာရှာသော သမီးလေး အသံကို ကြားယောင်မိကာ..
ဟုဆိုကာ သူမထုတ်ပြသောဖိနပ်အနီရောင်များထဲမှ ဖိနပ်ထိပ်လေးတွင် ပန်းပွင့်လေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အနီရောင်ဖိနပ်လေးကိုရွေးလိုက်သည်။ ဖြူနုသော သမီးလေး၏ ခြေတောက်လေးနှင့် ထိုဖိနပ်လေးမှာ မည်မျှတောင် လိုက်ဖက်လိုက်မည်နည်း…
ထိုအတွေးလေးနှင့် ဆိုင်ထဲမှ ထွက်လာစဉ် လမ်းထောင့်တွင် ရုတ်တရက် ကားတစ်စီးးး
“ ဒုန်း ”..
သူ ကိုင်ထားသော ဖိနပ်ထုပ်လေးမှာ လေထဲသို့ ၀ဲပျံလျှက်..
သူ့အတွေးထဲတွင် ဖိနပ်နီနီလေးက သမီးလေးရဲ့ ဖြူနုလှပသော ခြေထောက်လေးထက်မှာ…ဟင်..သမီးလေးရဲ့ ကျောင်းစိမ်းဂါဝန်လေးတောင် ဟောင်းနေပြီပဲ..အသစ်ဝယ်ပေးအုံးမှ…လွယ်အိတ်လေးလည်း နွမ်းနေပြီ..ငါ ဆန်အ်ိတ်တွေကို ဒီထက်များများပိုထမ်းပြီး သမီးလေးကို ၀ယ်ပေးရမယ်…
ဆန်အိတ်ထမ်းသော နေ့စားအလုပ်သမားဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို မျှဝေခံစားလျှက်..